I-Borja Prado ishiya i-Endesa kwaye ivule amathandabuzo amatsha kwinkampani | Ezezimali
Enye yeendaba ezithe zatsala umdla kwezi ntsuku zidlulileyo kukushiya isikhundla kwenkokeli ephezulu ye-Endesa emva kweminyaka engaphezulu kweshumi e-ofisini. Ewe, umongameli we-Endesa, u-Borja Prado, uzakushiya isikhundla sakhe entloko kwinkampani yombane kwintlanganiso kawonke-wonke elandelayo yabanini zabelo izakubanjwa nge-12 ka-Epreli. Ulwazi, oluhanjiswe yimithombo esondeleyo kumphathi eyaziyo le meko, sele iqinisekisiwe yinkampani yombane uqobo kwiKhomishini yeSizwe yoKhuseleko lweMarike (CNMV).
Ngoku kuya kuhlala kubonakala ukuba ngubani oza kuthatha izintambo zenkampani yombane waseSpain. Ngale ndlela, inkampani yase-Italiya enenxalenye enkulu yabanini zabelo inqwenela ukubeka usihlalo ongekho kwisigqeba esilawulayo kwinkampani yamandla yaseSpain. Amarhe acebisa ukuba lo mntu angangumphathi woosomashishini baseSpain, UJuan Rosell. Ngayiphi na imeko, iindaba zibonisa ukuba i-Itali ifuna umntu osondeleyo kwimidla yakhe. Inxalenye apho uBorja Prado ebenokubambana khona no-Enel kule minyaka idlulileyo.
Akukho mpendulo kwezi ndaba kuluhlu lwezabelo ze-Endesa kwiimarike ze-equity. Ukuba akunjalo, ngokuchaseneyo, kuhlala kumanqanaba afanayo, kufutshane kakhulu kwi-euro ezingama-22 ngezabelo. Oko kukuthi, ezi zenzo aziliqhubelanga ixabiso, nokuba lehla okanye lenyuka, kodwa ngendlela ezinzileyo nanjengoko ibisenza kwiintsuku zamva nje. Njengenye yeenkampani ezidwelisiweyo ezixabise kakhulu kwiinyanga ezilishumi elinambini ezidlulileyo, ngenzuzo ejikeleze i-13%. Ngokuhambelana nokuziphatha kwezinye iinkampani kwicandelo elinye.
1 Endesa: UPrado uvalelisa
2 Ngokugxila kwii-euro ezingama-23
3 Iprofayili kaBorja Prado
4 Ubuqhetseba bombane ngo-2018
5 Izenzo ezingaqhelekanga zonxibelelwano
6 Itekhnoloji yokulwa ubuqhetseba
Endesa: UPrado uvalelisa
Ngayiphi na imeko, ukuvalelisa umongameli we-Endesa, u-Borja Prado, ayothusi kwaphela. Ukuba akunjalo, ngokuchaseneyo, yayiyinyani eqhubeka ngamandla kwimarike yemasheya eyinkunzi yaseSpain. Esi inokuba sesinye sezizathu eziphambili zokuba kutheni amaxabiso e-Endesa khange ndifumane umahluko okhethekileyo kwiimarike zezabelo. Kukho nabahlalutyi bezemali abathi baxhalabile ngakumbi ukuba urhulumente uza kuba ngubani emva konyulo oluzayo ngo-Epreli 28.
Kwelinye icala, ayinakulityalwa ukuba le yeyona nto amacandelo amaninzi alawulwayo kwamashishini kwilizwe lethu. Ngaphaya kokunye ukuqwalaselwa kobuchwephesha kwaye mhlawumbi nakwindawo yokujonga izinto ezisisiseko. Ngelixa ngokuchaseneyo, ngokwephephandaba i-El País, phakathi kwabagqatswa bomongameli ongekho kwisigqeba igama likaJoan Rosell liyaqwalaselwa. Nangona kunjalo, uJosé Bogas ukwisikhundla se-CEO kwaye u-Enel uyaqhubeka nokuthembela ngaye. Ke ngoko, ngekhe kube sengqiqweni kuye ukuba abuyise indawo ekupheleni kweBorja Prado kwicala lenkampani yombane.
Ngokugxila kwii-euro ezingama-23
Ngayiphi na imeko, kwaye ukuba akukho zimanga kwiintsuku ezizayo, iinjongo zezabelo ze-Endesa kukufikelela kumanqanaba angama-23 euros ngesabelo ngasinye kunye nakumanqanaba okuvelela. Kule meko yokugqibela kuya kuxhomekeka kwindlela eziza kutshintsha ngayo iimarike zamashishini ezingenanzala emisiweyo kwiintsuku ezizayo. Ngaphandle kwezilungiso ezinokuthi zenzeke kwezi veki kwaye zinokutolikwa njenge Ukuqokelelwa kwenzuzo Phambi kokuvuka kweenyanga zokugqibela. Ngayiphi na imeko, yenye yezona zinto zixabisekileyo kakhulu okwangoku, ngaphandle kwamathandabuzo emihla yokugqibela.
Nangona kunjalo, ukumka kuka-Mongameli u-Endesa ngu-Borja Prado kunokubangela amathandabuzo amaninzi phakathi kwabatyali mali abancinci nabaphakathi. Ubuncinci kwikota elifutshane kwaye oko kuya kuxhomekeka kwiindaba malunga owangena ezihlangwini zakhe kwaye yintoni ngeenjongo zayo kumgca weshishini lenkampani yamandla yokuqala yaseSpain. Ngale ndlela, akusayi kubakho khetho ngaphandle kokujonga kakhulu kwinto enokwenzeka kwixabiso lezabelo zalo kula maxesha. Apho akukho nto inokukhutshelwa ngaphandle kuba nantoni na inokwenzeka. Kwaye apho ubulumko buya kuba yinto eqhelekileyo kwizenzo zabatyali mali abancinci nabaphakathi.
Iprofayili kaBorja Prado
Kwelinye icala, ayinakulityalwa ukuba iBorja Prado yayinobudlelwane obunzima kunye ne-CEO yangoku ye-Enel, UFrancesco Starace, owaye wabeka ithemba lakhe kwi-Bogas, i-CEO ye-Spain. Le nyani inokuthi yohlwaye isenzo sika-Endesa kwiimarike zokulingana zikazwelonke. Kungenxa yokuba ukungangqinelani okukhulu phakathi kwabaphathi base-Itali nabaseSpain akunakuqatshelwa. Ngoku kuyakufuneka ujonge ukuba yintoni ukufaneleka kwentloko entsha yenkampani yombane yaseSpain. Ngale ndlela, abatyali mali baya kuyazi kakuhle inguquko yayo yexesha elizayo.
Enye into ekufuneka ithathelwe ingqalelo ukusukela ngoku bubudlelwane obugqwesileyo uBorja Prado abenabo nabo bonke amagunya ezopolitiko nawoluntu yelizwe lethu. Zombini zomqondiso omnye kunye nezinye kwaye le yinto enokulahleka ukusukela ngoku. Kwimeko apho, ukuvela kwale nkampani kwintengiso yesitokhwe sikazwelonke kunokohlwaywa. Ngokukodwa xa kufikwa kwicandelo elilawulwa njengombane okwangoku. Kwaye ifuna inkxaso yezopolitiko ukunyusa imigca yeshishini, ngaphaya kwezinye izinto zobugcisa.
Ngale ndlela, ixesha elingachazwanga liqala kwiimarike zezemali kwaye okwangoku kungaziwa ukuba zingaphela njani. Njengokuba uza kwenza njani phuhlisa umgaqo-nkqubo wokwahlulahlula yenkampani ukusukela ngoku yabela zonke izibonelelo zayo kulwabiwo lwale ntlawulo phakathi kwabanini zabelo. Kuya kufuneka ukuqinisekisa ukuba kwenzeka njani kule minyaka imbalwa izayo kunye nomongameli omtsha phezulu kwe-Endesa. Into abaza kujonga kuyo bonke abatyali-mali ngeglasi yokukhulisa kwaye inokunika enye okanye okunye ukungoneliseki kubanini zabelo benkampani.
Ubuqhetseba bombane ngo-2018
I-Endesa ibhaqe ubuqhetseba bombane phantse abangama-65.000 ngonyaka ka-2018 kwaye yafumana kwakhona i-kWh engama-601 ezigidi, inani elilingana nokusetyenziswa kombane ePalma de Mallorca kangangeenyanga ezintandathu. Inkqubo ye- Ukusetyenziswa kwetekhnoloji entsha kunye nokusebenzisana noMkhosi woKhuseleko kunye nabemi benza ukuba kube nakho ukomeleza umlo wokulwa nale ngxaki inkulu. Kunyaka ophelileyo kuphela, izikhalazo zabemi zanceda ukufumanisa phantse ama-4.000 ubuqhetseba.
Kunyaka ophelileyo, ukuhlolwa kokuhlola okwesine kwalishumi okwenziwe yinkampani kuqukunjelwe nge ukufumanisa ubuqhetseba. Kwi-48% yamatyala, babengenazo ii-hookups ezingekho mthethweni kwinethiwekhi ngabasebenzisi ngaphandle kwesivumelwano kunye nabanye, kwezinye iintlobo zobuqhetseba, ezinje ngokudibanisa kabini okanye ukusetyenziswa kwezixhobo zokulinganisa. Ngaphandle kwala manani, kubalulekile ukuba uqaphele ukuba ubuqhetseba bombane, ngaphezu kwako konke, yingxaki enkulu kukhuseleko nakwimpilo yabantu, kwabo bobabini ubuqhetseba kunye nakwabo bamngqongileyo. Kwiminyaka yakutshanje, kuye kwakho amatyala amaninzi emililo kunye nokukhutshwa okubangelwe kukunyanzelwa kwezixhobo.
Izenzo ezingaqhelekanga zonxibelelwano
Enye into ebangela ingxaki yobuqhetseba kukukhula kwezityalo ze-cannabis ezenzekileyo kule minyaka idlulileyo. Ezi zityalo zihlala zihamba kunye ii-hookups ezingekho mthethweni kwigridi yombane, ezinokuthi zenze ukuphazamiseka okubonakalayo kumaziko abemi apho aqhutyelwa khona. Ikhaya elisetyenziswa njengendawo “yangaphakathi” yokutyala intsangu lisebenzisa izindlu ezilinganayo ezingama-20 kunye nokuxinana kwezi zityalo kwiindawo ezithile kugcwalisa uthungelwano.
Ubuqhetseba bombane buyingozi kuluntu xa lulonke, kuba oko kuguqulela kunyuso lwe- Ibhili yombane yabo bonke abathengi kwaye banokubeka emngciphekweni ukhuseleko kunye nomgangatho wonikezelo lwabanye abathengi. Ngapha koko, ngokuchasene noko kunokukholelwa, ubuninzi bobuqhetseba bombane eSpain benziwa ngabathengi abakhulu, zombini iinkampani kumashishini nakwicandelo leenkonzo kunye nakumashishini kunye / okanye kumakhaya abucala asebenzisa kakhulu.
Itekhnoloji yokulwa ubuqhetseba
I-Endesa ibheja ngokuqinileyo kubuchwephesha kwisicwangciso sayo seshishini. Ukusetyenziswa kwee-algorithms eziphambili zokufunda ngomatshini (Ukufunda ngomatshini) kunye nokufunda okunzulu (ukuFunda okunzulu) kwi Idatha enkulu ivumela uninzi lwenkampani ukuba ijongane ngokufanelekileyo. Ke ngoko, iphinda-phinda iinzame zayo ekusetyenzisweni kwezi algorithms zokufumanisa ubuqhetseba, ukulawula ukuphucula ukubonwa kwamatyala kunye nokwenza ngokufanelekileyo.
Ukongeza ekusetyenzisweni kweDatha eNkulu, kubuchwephesha obutsha obuvelisiweyo kule minyaka idlulileyo yokulwa ubuqhetseba. Phakathi kwezinye, iividiyo zekopi kunye neetreac zivelile, ezivumela ukuba kuhlolwe ukufakwa komhlaba, okufakwe ezindongeni okanye okungafikelelekiyo ngamehlo, ukubona, phakathi kwezinye izinto, ubukho boqhagamshelo kabini.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ezezimali » Iimveliso zezemali » U-Borja Prado ushiya i-Endesa kwaye uvula amathandabuzo amatsha kwinkampani